Mayelana NATHI - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd., ikhodi yamasheya: 300453, yasungulwa ngo-1997. Kuyibhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu elenzelwe i-R & D yezokwelapha, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo.Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yokuqongelela, inkampani inombono womhlaba jikelele, ilandela ngokucophelela ukuthuthukiswa kwezwe amasu, ukulandela eduze izidingo zomtholampilo, ukuthembela ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi ezwakalayo kanye nezinzuzo ezivuthiwe ze-R & D kanye nezokukhiqiza, futhi sekuhole phambili embonini ukudlulisa uhlelo lwe-CE kanye ne-CMD Management Management kanye nesitifiketi somkhiqizo kanye nokugunyazwa kokumaketha kwe-US FDA (510K). Ukukhuthala ngenkuthalo nokuphishekela ubuhle, manje sekuthuthuke kwaba yinkampani efakwe kuhlu emkhakheni wokuhlanzwa kwegazi wasekhaya kuyo yonke ikhambi lezimboni. Futhi iyinkampani yokuqala futhi okuyiyo kuphela efakwe ohlwini embonini yedivayisi yezokwelapha esifundazweni saseJiangxi.
Iminyaka engaphezu kwengu-20, iSanxin Medtec ibilokhu iqhubekisela phambili ukwakheka komkhiqizo wayo futhi iguqule ngempumelelo futhi yathuthukisa kusuka emkhakheni wokumnika wendabuko, yaba enye yezinkampani ezimbalwa zasekhaya ezinganikeza izixazululo kulo lonke uchungechunge lomkhakha wokuhlanzwa kwegazi. Sihlinzeke ngezinsizakalo eziqoqiwe zezikhathi ezingaphezu kwezigidi eziyi-120 zezinsizakalo ze-dialysis nezokugoma izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingama-800 esikhungweni sokulawula izifo. Manje sesinezitifiketi ezingaphezu kwama-80 zobunikazi, ngaphezu kwezitifiketi ezingama-80 zokubhaliswa kwemikhiqizo futhi sibambe iqhaza ekubhalweni kwamazinga ayi-10 kazwelonke nawezimboni. Imikhiqizo yethu ithengiswa emazweni angaphezu kwezi-60 nezifunda. Inkampani ihlola ngenkuthalo iphethini entsha yentuthuko yezimboni futhi isungule ukwakheka kokuthuthukiswa kukazwelonke okugxile kuJiangxi. Imikhiqizo yayo emikhulu ihlanganisa uchungechunge oluyisithupha lokuhlanzwa kwegazi, izihlalo ezihlala ngaphakathi, imijovo, ukumpontshelwa, ukuhlinzwa nge-cardiothoracic, kanye nokuvikelwa.
Umuthi wokugoma we-CDC
Amazinga kazwelonke / embonini
Emashumini ambalwa edlule, abakwaSANXIN baphendule ngenkuthalo isidingo semakethe sokukhiqizwa okuhlakaniphile. Hlanganisa izinsiza zangaphakathi zomkhakha bese uhlanganisa ubuchwepheshe bezokwakha ukudala izixazululo zokuphatha i-workshop ezihlakaniphile. Ngenkathi uthola ukukhiqizwa okuhlakaniphile, futhi ikulethela amakhono wokulandela ngomkhondo wangempela wesikhathi sangempela, izinguquko zesikhathi sangempela, kanye nokuqapha kwangempela kwesikhathi, okunciphisa kancane kancane ukungenelela komuntu, kuthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo nesikhathi sokulethwa, futhi kuletha ukuphathwa okulula kakhulu.